မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ | ShweProperty.com
ငှားရန် - မရမ်းကုန်းမြို့နယ်(7)မိုင်တွင်လူံးချင်းငှားရန်
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် သလ္လာဝတီလမ်းတွင်အကျယ်အဝန်း 3600 sqft ရှိသော RC နှစ်ထပ်တိုက်အားတစ်လလျှင် သိန်း 20 ညှိနှိုင်းနှင့်ငှားရန်ရှိပါသည်။4mbr.7AC.water…...
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် သလ္လာဝတီလမ်းတွင်အကျယ်အဝန်း 3600 sqft ရှိသော RC နှစ်ထပ်တိုက်အားတစ်လလျှင် သိန်း 20 ညှိနှိုင်းနှင့်ငှားရန်ရှိပါသည်။4mbr.7AC.water…
Listed 30 April 2019
Property ID: S-1198248
Mobile no : 09977901501, 09977901502, 09977901503,
သံလျင် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
*Living Area - 937 sqft * Bed Room - 1 Master Bed Room & 1 Single Bed Room *Living Room & Kitchen *Toilet *Swimming Pool *Internet Access * Fully Furnished...
*Living Area - 937 sqft * Bed Room - 1 Master Bed Room & 1 Single Bed Room *Living Room & Kitchen *Toilet *Swimming Pool *Internet Access * Fully Furnished
Property ID: S-1184709
*Living Area - 1,550 Sqft *2 Master bedroom with bathroom attached *Large Living Room *Dining room *Kitchen & Maid room, Laundry area *4 A/C *Lift(2) units *Private Car Parking *24 hour Generator backup system for the whole building *24 hour Security...
*Living Area - 1,550 Sqft *2 Master bedroom with bathroom attached *Large Living Room *Dining room *Kitchen & Maid room, Laundry area *4 A/C *Lift(2) units *Private Car Parking *24 hour Generator backup system for the whole building *24 hour Security
Khay Mar Street
Property ID: S-1184802
* Living Area - 14,000 sqft/ 85*47 (4 RC) * Car packing Area - 2,200 sqft * 25 office rooms * Power Meter * Own Meter * 36 A/C *2Line Phone * Water Heater, ...
* Living Area - 14,000 sqft/ 85*47 (4 RC) * Car packing Area - 2,200 sqft * 25 office rooms * Power Meter * Own Meter * 36 A/C *2Line Phone * Water Heater,
Listed 29 April 2019
Property ID: S-1190798
ငှားရန် - House Rent in Ahlone (ID-1261)
Three and half stories house for rent in Ahlone Township. House area is – 1250 sqft, has Living-room, Four Master Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Asking Price – 30 Lakh (Nego) House Rent in Ahlone (ID-1261) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just…...
Three and half stories house for rent in Ahlone Township. House area is – 1250 sqft, has Living-room, Four Master Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Asking Price – 30 Lakh (Nego) House Rent in Ahlone (ID-1261) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just…
Listed4April 2019
Property ID: S-1195530
Mobile no : 09792444317, 09974401199
ငှားရန် - တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ သစ္စာလမ်းမကြီးပေါ်တွင်…
ပေအကျယ်(60x60)ရှိပြီး အဆောက်အဦးပါသည်။ နေရာအလွန်ကောင်းသည်။ကားပါကင်ပါပြီး လုပ်ငန်းစုံရသည်။ ကျောင်း၊ဈေး၊မှတ်တိုင်နီးသည့်အတွက်သွားလာရေးအဆင်ပြေလွယ်ကူပါသည်။လမ်းစုံလမ်းခွအနီးတွင်ဖြစ်သည်။...
ပေအကျယ်(60x60)ရှိပြီး အဆောက်အဦးပါသည်။ နေရာအလွန်ကောင်းသည်။ကားပါကင်ပါပြီး လုပ်ငန်းစုံရသည်။ ကျောင်း၊ဈေး၊မှတ်တိုင်နီးသည့်အတွက်သွားလာရေးအဆင်ပြေလွယ်ကူပါသည်။လမ်းစုံလမ်းခွအနီးတွင်ဖြစ်သည်။
Listed 26 March 2019
Property ID: S-1194926
ငှားရန် - Code-8695 အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းရှိ…
ကာ6းစီးခန့်ရပ်၍ရပါသည်။ မြေအကျယ် - 42'x160' အိမ်အကျယ် - 26'x49' (2RC)...
ကာ6းစီးခန့်ရပ်၍ရပါသည်။ မြေအကျယ် - 42'x160' အိမ်အကျယ် - 26'x49' (2RC)
Property ID: S-1194111
Mobile no : 09251555282, 09-251555292, 09-451398167
ငှားရန် - သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ မလိခကွန်ဒိုရှိ်ရောင်း/ငှားရန်ရှိသောကွန်ဒိုတိုက်ခန်း(Malihku…
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ မလိခကွန်ဒိုရှိ် (1300)Sqft, ၂လွှာ၊ ပါကေးခင်း၊ မာစတာအိပ်ခန်း၁ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း၂ခန်း၊ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ၊…...
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ မလိခကွန်ဒိုရှိ် (1300)Sqft, ၂လွှာ၊ ပါကေးခင်း၊ မာစတာအိပ်ခန်း၁ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း၂ခန်း၊ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ၊…
Property ID: S-1193495
Mobile no : 09264009696
ငှားရန် - တာမွေမြို့နယ် 157လမ်း တာမွေပလာဇာနှင့်…
နေရာကောင်း သွားရလာရအဆင်ပြေ၊ ရုံးခန်းဖွင့်ရန်ပိုမိုအဆင်ပြေ။Gr Floor and 1Floor-25သိန်း၊2Floor and 3Floor-18သိန်း။...
နေရာကောင်း သွားရလာရအဆင်ပြေ၊ ရုံးခန်းဖွင့်ရန်ပိုမိုအဆင်ပြေ။Gr Floor and 1Floor-25သိန်း၊2Floor and 3Floor-18သိန်း။
Property ID: S-1193046
ငှားရန် - ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ မဟာဗန္ဓုလကွန်ဒိုရှိငှားရန်ရှိသောကွန်ဒိုတိုက်ခန်း(Malihku…
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ မဟာဗန္ဓုလကွန်ဒိုရှိငှားရန်ရှိသောကွန်ဒိုတိုက်ခန်း(Malihku Real Estate) ---------------------------------------------------------------------------…...
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ မဟာဗန္ဓုလကွန်ဒိုရှိငှားရန်ရှိသောကွန်ဒိုတိုက်ခန်း(Malihku Real Estate) ---------------------------------------------------------------------------…
Listed 8 March 2019
Property ID: S-1193174
ငှားရန် - တောင်ဥက္ကလာ၊စက်မှုဇုန်တွင်ဈေးနှုန်းသင့်ဂိုဒေါင်များငှားရန်ရှိသည်(Malihku…
(၁) တောင်ဥက္ကလာစက်မှုဇုံ ၊ ၃၄x၅၄ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ၁၅ သိန်း (၂) ။ ၂၅x၅၀ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ၁၀သိန်း (၃) ။ ၂၅x၅၀ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ၁၀သိန်း For…...
(၁) တောင်ဥက္ကလာစက်မှုဇုံ ၊ ၃၄x၅၄ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ၁၅ သိန်း (၂) ။ ၂၅x၅၀ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ၁၀သိန်း (၃) ။ ၂၅x၅၀ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ၁၀သိန်း For…
Listed6March 2019
Property ID: S-1193008
ငှားရန် - ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် အမှတ် ၅၁၉/၅၂၁…
Completion Year - 2018 Structure - Reinforced concrete structure Ceiling Height - 8.7 ft Floor Load - 40 pound per Sqft Power capacity - 220V and 380V Electrical back-up generators - 350 kvA Water - City water supply & well Elevator - Two (13-passenger elevators) Car park - 30 cars CCTV cameras - Access…...
Completion Year - 2018 Structure - Reinforced concrete structure Ceiling Height - 8.7 ft Floor Load - 40 pound per Sqft Power capacity - 220V and 380V Electrical back-up generators - 350 kvA Water - City water supply & well Elevator - Two (13-passenger elevators) Car park - 30 cars CCTV cameras - Access…
Kyaw Zin Htike
Advertiser : Kyaw Zin Htike
Property ID: S-1192899
Office no : 09447500001
ငှားရန် - စမ်းချောင်းမြို့နယ် ဗဟိုလမ်းနှင့်ဗားဂရာလမ်းထောင့်တွင်(15*50)ပေကျယ်သော…
Listed5March 2019
Property ID: S-1192839
ငှားရန် - လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် မြေ(60*60)ပေကျယ်သောလှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်(Zone-5)…
Property ID: S-1192823
ငှားရန် - လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်(Zone-5)…
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်(Zone-5) ဌားရန်ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရန်-09-787519338/09-448886718...
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်(Zone-5) ဌားရန်ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရန်-09-787519338/09-448886718
Property ID: S-1192813
ငှားရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုံရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုံ ၊မြေ၁ဧကကျော် ၊ ဂိုဒေါင် 20800 Sqft ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ရေမီး ၊ (1Sqft 300ks) 60 Lks Contacts us; 09-264009898 , 09-264009797 , 09-264009696 ...
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုံ ၊မြေ၁ဧကကျော် ၊ ဂိုဒေါင် 20800 Sqft ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ရေမီး ၊ (1Sqft 300ks) 60 Lks Contacts us; 09-264009898 , 09-264009797 , 09-264009696
Listed4March 2019
Property ID: S-1181860
*Living Area - 1637.94 sqft *1 Master Bed Room & 1 Common Bed Room, *Maid Room *Living Room & Kitchen, Dinning Room *Shoe Room *Storage Room *Laundry Room *Balcony *Shopping Mall and Cinema in the complex *Near Parami Hospital...
*Living Area - 1637.94 sqft *1 Master Bed Room & 1 Common Bed Room, *Maid Room *Living Room & Kitchen, Dinning Room *Shoe Room *Storage Room *Laundry Room *Balcony *Shopping Mall and Cinema in the complex *Near Parami Hospital
ငှားရန် - GEMS Condo တိုက်သစ် လူမနေရသေးသော အခန်းငှားမည်
( 1505 sqft ) 2MBR , 1BR , A/C, Fullyfurniture , အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး၊ အသင့်နေရန်...
( 1505 sqft ) 2MBR , 1BR , A/C, Fullyfurniture , အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး၊ အသင့်နေရန်
Listed 20 February 2019
Advertiser : New Life
Property ID: S-1159339
Mobile no : 09 256113342, 09 33070123
Office no : 09 43089164, 09788598020
ငှားရန် - ရန်ကင်း၊ ဘောက်ထော်၊ ခေမာသီ လမ်းမရှိ…
( 40 x 60 ) 2RC , 3MBR , 1BR , A/C, ပါကေး...
( 40 x 60 ) 2RC , 3MBR , 1BR , A/C, ပါကေး
Property ID: S-1159343
ငှားရန် - မြေနီကုန်း ရှမ်းကုန်းလမ်းရှိ…
( 17 x 72 ) GF Hall , ကြွေခင်း...
( 17 x 72 ) GF Hall , ကြွေခင်း
Property ID: S-1159974
မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များတိုက်ခန်းများမီနီကွန်ဒိုများ ကွန်ဒိုများလုံးချင်းအိမ်ဝန်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်းရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများခြံ၊ မြေကွက်များစက်မှုဇုန်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များကချင်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များကရင်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ
ကယားပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များမွန်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များချင်းပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များနေပြည်တော်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများကချင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများကရင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
ကယားပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများမကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများမွန်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများချင်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများနေပြည်တော် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများကချင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများကရင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ
ကယားပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများမကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများမွန်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ
ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများချင်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများနေပြည်တော် ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များကချင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များကရင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ
ကယားပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များမကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များမွန်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ
ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များချင်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များနေပြည်တော် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များကချင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များကရင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ
ကယားပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များမကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များမွန်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ
ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များချင်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များနေပြည်တော် ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများကချင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများကရင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ
ကယားပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများမကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများမွန်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ
ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများချင်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများနေပြည်တော် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်ကချင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်ကရင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
ကယားပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်မွန်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်ချင်းပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်နေပြည်တော် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
All Property types, for rent in all townships,
ဧရိယာ : - max